0 aD: mutambo wevhidhiyo une yakakura kuvandudza uye nhau | Linux Vakapindwa muropa
0 aD: mutambo wevhidhiyo une yakakura kuvandudzwa
0 AD iri-chaiyo-nguva zano vhidhiyo yemutambo zita yatatotaura nezvayo pane dzimwe nguva mune ino blog. Icho chikonzero hachisi chega chekuti iri yemahara uye yakavhurwa sosi zita rakagadzirwa neMitambo Yemoto, kana kuti inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira GNU / Linux. Izvo zvinopfuura izvo, nekuti kana iwe waifunga kuti ese akavhurika emitambo yemavhidhiyo akaipa, iwe unofanirwa kungo tarisa iyi kuti uone kuti chirevo chisiri icho.
Kana usati wambozviedza, haufanire kuisa imwe euro. Iwe unogona chete kupinda iyo zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti uye kurodha pasi kuti ugone kunakidzwa naro kubva ikozvino. Pamusoro pezvo, nhasi uno uchaona kuti yatove neyakagadziridzwa nyowani inosanganisira inonakidza kuvandudza uye nhau zvichienzaniswa neshanduro yapfuura kubva pa0 kusvika D
Uyu Wemoto Wemoto Wemitambo 0AD zita ikozvino rine guru rekuvandudza ne Alpha 24 kuvhura. Kunyangwe yakadaro nhanho yekutanga yekusimudzira, chokwadi ndechekuti yatove kushanda zvinoshamisa uye ine zvishoma zvekugodora imwe nzira yekutengesa yevhidhiyo mitambo. Uku ndiko kunakidzwa kukuru kwevateveri vemusoro uyu, avo vanga vasati vaona chero nhau kubva pakatangwa Alfa 23 muna 2018.
Zvino, mune iyi Alpha 24 uchaona zvinotevera nhau uye kugadzirisa:
ari 0 aD mifananidzo yakagadziridzwa muhunhu. Ivo vaive vakanaka zvisati zvaitika, kunyangwe pakuvhura mukati munguva yemutambo. Asi ikozvino ivo vatove nani. Sezvamunoziva, pakutanga kwegore rino kwaive nekuvandudzwa kare mune izvi, senge rutsigiro rweAnti-Aliasing kupfava iyo mifananidzo kuti irege kutaridzika kunge yakapikiswa, uye ikozvino yaenderera mberi ichivandudza mune izvi , nerutsigiro rweFXAA.
Mitambo inozove yakawanda "zvine hupenyu", nekuunzwa kwe mhuka itsva, senge bere reEurasian shava, bere remumvuri, mvuu, mombe, mhou, pamwe nekuvandudzwa kwehupenyu hwaimbove nematambudziko pakuona vanhu vachifamba, panguva yekuvakwa kwezvivakwa, nezvimwe.
Kuchavapo matani ekuvandudza mune dzimwe nzvimbo yemutambo. Semuenzaniso, nyowani nyowani nyowani, akavandudzwa magadzirirwo ezvikamu zvakasiyana, mepu nyowani yeSahyadri Buttes, Atlas mipata, nezvimwe, pamwe nekuvandudzwa kwemifananidzo yemitambo uye nezvimwe.
Anosimudzira akawedzerwa kuitira kuti iyo nzvimbo yekuvaka inogona kugadziriswa. Ingo bata bata kiyi yeCtrl uchifamba uchitenderera chirongwa chekuvaka uye gadzirisa sezvaunoda.
Ehezve, semamwe anozivikanwa mazita emazita, anosanganisira a mamiriro ekugadzirisa kuzvigadzirisa. Iyi zvakare ine zvimwe zvitsva zvinowedzerwa zvemamepu matsva uye zvimwe zvinhu zvitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » 0 aD: mutambo wevhidhiyo une yakakura kuvandudzwa
Mhoro, ndiregerere, enda kune iyo yepamutemo webhusaiti uye ini handione chinongedzo chekurodha pasi makumi maviri nemana, makumi maviri nematatu chete ane vhezheni yekare, iwe unogona ndapota kupfuudza iyi link ndatenda
Izvozvowo, waiwana kupi vhezheni 24, pane peji 23 chete inobuda
Mhoro. Izvi muchiSpanish?. Ndatenda.
Francis T. akadaro
Iwe unogona zvakare kuisa mari 1 euro (kana zvimwe) uye kutsigira yemahara software:
Pindura kuna Francisco T.
xrdesktop: ichiri "gehena-yakakombama" pakuvandudza chaiyo chaiyo paLinux
Firefox 76.0.1 yakaburitswa kugadzirisa chete mashoma emabhugi